Avia, Ianareo Zanakalahin’Andriamanitra Rehetra - Thomas S. Monson
Enga anie isika tsirairay handalina amim-pahazotoana ny soratra masina, hanao drafitra arahina tanjona ho an’ny fiainana, hampianatra ny fahamarinana miaraka amin’ny fijoroana ho vavolombelona, ary hanompo ny Tompo amim-pitiavana
Indroa isan-taona ity Foiben’ny Fihaonamben’ny Fiangonana mahafinaritra ity no toa miteny amintsika, amin’ilay feony mandresy lahatra manao hoe: “Avia, ianareo zanakalahin’Andriamanitra rehetra izay nandray ny fisoronana.”1 Misy fahatsapana miavaka izay manenika ity fivoriamben’ny fisoronana ato amin’ny Fiangonana ity.
Anio alina dia mpihazona fisoronana an’alin-kisa manerana izao tontolo izao no manompo ny Tompo amin’ny maha misiônerany azy ireo. Araka ny nolazaiko tamin’ny hafatro aninkeheo maraina dia manana misiônera 65.000 izao isika eny amin’ny sahan’ny misiona, ary misy an’arivony maro no miandry ny hiditra ny foibe fanofanana ny misiônera na efa eo andalam-piandrasana ny valin’ny taratasy fangatahana ho misiônera. Tianay ary derainay ireo izay manam-piniavana sy ireo izay efa tsindrian-daona ny hanompo.
Ny soratra masina dia tsy ahitana fanambarana manan-danja kokoa, sy andraikitra mamatotra kokoa, ary torolalana mivantana kokoa noho ilay didy nomen’ny Tompo efa nitsangana tamin’ny maty tamin’Izy niseho tamin’ireo mpianany iraikambinifolo tany Galilia. Hoy Izy:
“Koa mandehana hianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.
“Sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo; ary, indro, Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao.”2
Io didy masina io, miaraka amin’ny fampanantenana feno voninahitra miaraka aminy, no teny filamatsika ankehitriny toy ny tamin’ny fotoana niainan’i Jesoa tety an-tany. Ny asa fitoriana dia rafitra iray hamantarana Ny Fiangonan’i Jesoa Kristy ho an’ny Olomasin’ny Andro Farany. Efa toy izany foana hatramin’izay; ary mbola ho toy izany hatrany. Araka ny voalazan’ny Mpaminany Joseph Smith hoe: “Rehefa nodinihana ny zava-drehetra, dia ny mitory ny Filazantsara no adidy manan-danja indrindra.”3
Ato anatin’ny roa taona monja dia hahavita ny asany daholo ireo misiônera amin’ny fotoana feno izay manompo ankehitriny ato amin’ity tafik’Andriamanitra ity, ary ho tafaverina any an-tokantrano misy azy eo anivon’ireo malalany. Ho an’ireo lehilahy, ny handimby azy ireo dia hita eto androany alina eo anivon’ny Fisoronana Aharôna an’ny Fiangonana. Ry zatovolahy isany, vonona hamaly ny antso ve ianareo? Vonona ny hiasa ve ianareo? Vonona hanompo ve ianareo?
Amin’ny fomba fijery tsara indrindra ny asa fitoriana dia mitaky fanitsiana hentitra eo amin’ny fomba fiainana. Mitaky asa betsaka sy fanoloran-tena lehibe, fahafoizan-tena hanadinoana ny tena sy vavaka feno hafanam-po. Ho vokany, ny asa fanompoana feno fanoloran-tena hitoriana dia ahazoana tombony, dia fifaliana mandrakizay, izay mitohy mandritra ny androm-piainana sy hatrany amin’ny mandrakizay.
Ny fanamby ho antsika dia ny ho mpanompo mahasoa kokoa ao amin’ny tanimboaloboky ny Tompo. Mihatra amintsika rehetra izany, na firy taona na firy taona, ary tsy na